Imbali yeMelika yokuqala yeKomiti ye-1940
Ngaphezulu kweminyaka engama-75 ngaphambi kokuba uMongameli uDonald Trump enze inxaxheba ebalulekileyo kwiphulo lakhe lonyulo, imfundiso ethi "iMelika yokuqala" yayingqondweni yabantu abaninzi baseMerika ukuba bakha ikomiti ekhethekileyo ukwenzela ukuba kwenzeke.
Ukuphuma kwe- American isolationist movement , iMelika yokuqala yeKomidi yokuqala yabizwa ngoSeptemba 4, 1940, ngenjongo ephambili yokugcina iMelika ngaphandle kweMfazwe Yehlabathi II ilwa ngexesha elininzi eYurophu naseAsia.
Ngobunzima bokuhlawulela ubulungu babantu abayi-800,000, iMelika yokuqala yeKomidi (AFC) yaba yinye yeqela eliphambili elichasene nemfazwe kwimbali yaseMelika. I-AFC yachithwa ngoDisemba 10, 1941, iintsuku ezintathu emva kokuhlaselwa kweJapan kwi-US base basePearl Harbor , eHawaii, babetha iMelika kwimfazwe.
Iziganeko eziya phambili kwi-Komiti yokuqala ye-America
NgoSeptemba 1939, iJamani, phantsi kwe- Adolph Hitler , yahlasela iPoland, igxotha imfazwe eYurophu. Ngowe-1940, kuphela i-Great Britain eyayinomkhosi omkhulu ngokwaneleyo kunye nemali eyaneleyo yokuxhathisa ukunqoba kukaNazi . Uninzi lweentlanga ezincinci zaseYurophu zagqitywa. IFransi yayiphethwe yimikhosi yaseJamani kunye neSoviet Union yayisebenzisana nesivumelwano sokungahambisani naso neJamani ukuze sikhulise iimfuno zayo eFinland.
Nangona uninzi lwabantu baseMelika beva ukuba ihlabathi elipheleleyo liza kuba yindawo ephephile ukuba iBritish Great iphumelele iJamani, ayenqikaza ukungena kwimfazwe iphinde iphinde ilahlekelwe yimpilo yaseMerika ebeyifumene nayo ngokuthatha inxaxheba kwimpikiswano yokugqibela yaseYurophu. Mna .
I-AFC iya kwiMfazwe ngeRoosevelt
Ukungabaza ukungena kwenye imfazwe yaseYurophu yaphefumlela iNkcazo yase-US ukuba yenze iNxaxheba yeZingathathi - zintlalo ze-1930 , ibenqande kakhulu uhulumeni waseburhulumenteni wase-US ukuba anike inkxaso ngoncedo lwemibutho, iingalo, okanye izinto zemfazwe kuzo zonke iintlanga ezibandakanyekile kwimfazwe .
UMongameli uFranlin Roosevelt , owayechasene naye, kodwa wasayina, ukungathathi hlangothi, waqhelisa amaqhinga angenamthetho afana nawo athi "Ababhubhisi beziseko" icebo lokuxhasa imizamo yemfazwe yaseBrithani ngaphandle kokuphulaphula ileta yeZenzo zokungathathi hlangothi.
I-American First Committee yalwa noMongameli uRovelvelt ngexesha lonke. Ngowe-1941, ubulungu be-AFC buye budlulela kuma-800,000 kwaye ziqhayisa iinkokeli ezinobungqina kunye neempembelelo kuquka isiqhawe selizwe uCharles A. Lindbergh . Ukudibanisa noLindbergh babezolondolozo, njengoKolonel Robert McCormick, umnini weChicago Tribune; inkululeko, njengeNorman Thomas; kunye nabanqwenela ukuzimela, njengeSenator uBurton Wheeler waseKansas kunye no-Father Edward Coughlin olwachasayo.
Ngasekupheleni kwe-1941, i-AFC iphikisana ngokutsha nomongameli kaMongameli Roosevelt wokulungiswa kwemali-mboleko egunyaza umongameli ukuba athumele izixhobo kunye neemfazwe eBrithani, eFransi, eChina, kwi-Soviet Union nakwezinye iintlanga ezisongelayo ngaphandle kokuhlawulwa.
Ngeentetho ezihanjiswa kulo lonke uhlanga, uCharles A. Lindbergh wathi ukuxhaswa kuka-Roosevelt eNgilani kwakunomdla wendalo, iqhutywe ngandlela-thile ngobudlelwane obude bukaRovelvelt noNkulumbuso waseBrithani uWinston Churchill . ULindbergh wathi ukube kunzima, ukuba kungenakwenzeka, eBrithani yedwa ukunqoba iJamani ngaphandle kwesigidi sejoni kunye nokuba inxaxheba kweMelika kwimizamo yayiza kuba yingozi.
"Imfundiso esimele siyenze kwiimfazwe zaseYurophu ukuze sikhusele iMelika iya kuba yingozi kwisizwe sethu ukuba siyayilandela," kutsho uLindbergh ngowe-1941.
Njengoko iMfazwe iqhuma, Inkxaso ye-AFC iyancipha
Nangona i-AFC yenkcaso kunye nenzame zokubambelela, iCongress yadlulisela uMthetho wokuThengisa iMali-mboleko, unikezela i-Roosevelt amandla amakhulu ekunikezeni iAllies ngezixhobo kunye nempahla yemfazwe ngaphandle kokwenza amabutho ase-US.
Inkxaso karhulumente kunye neenkomfa ze-AFC yenziwe ngakumbi ngoJuni 1941, xa iJamani ihlasela iSoviet Union. Ngasekupheleni kwe-1941, kungekho mqondiso wee-Allies ezikwazi ukuyeka ukuqhubela phambili kwe-Axis kunye nosongelo olubonakalayo lokuhlasela kwe-US, impembelelo ye-AFC yayiphume ngokukhawuleza.
I-Pearl Harbour ibonisa ukuphela kwe-AFC
Inkqubo yokugqibela yokuxhasa ukungathathi hlangothi kwe-US kunye neKomiti yokuqala yaseMelika yachithwa nokuhlaselwa eJapan kwiPearl Harbor ngoDisemba 7, 1941.
Kwiintsuku ezine kuphela emva kokuhlaselwa, i-AFC ichithekile. Kwinqaku lokugqibela ekhutshwe ngoDisemba 11, 1941, iKomiti yathi nakuba iipolisi zayo zinokuthintela ukuhlaselwa kweJapan, imfazwe yayifikile eMelika kwaye ngoko yayisiba ngumsebenzi waseMelika ukusebenzela injongo yokudibanisa iAxis amandla.
Emva kokupheliswa kwe-AFC, uCharles Lindbergh wajoyina umzamo wemfazwe. Ngesikhathi ehlala engumhlali, uLindbergh wagijima kwimisebenzi engama-50 yokulwa kwindawo yasePacific kunye ne-433rd Fighter Squadron. Emva kwemfazwe, uLindbergh wayedla ngokuya eYurophu ekuncediseni umzamo wase-US wokwakha kwakhona nokuvuselela leli zwekazi.
GRE Imizekelo yokuzaliswa kombhalo
Imigaqo yoKhuseleko lokuThuthwa kweeBhendi ezi-26 ukuya ngaphantsi kweenyawo ezingama-40
Oo, i-Irony! 20 Imiqondiso Yemihla ngemihla Ayinakunqikazi